ရထားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်အလည်ခရီး | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်အလည်ခရီး
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 25/12/2020)
စိတ်ဝင်စားဖြစ်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူခရီးသွားများအတွက် အားကစား, Tour အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ပရီးမီးယားလိဂ်အဘို့ပွဲအထူးနိုင်ပါတယ် အတှေ့အကွုံ. အနည်းငယ်အသင်းလိဂ်ပွဲစဉ်တစ်ခုချင်းစီမှရာသီမှထကျကြပေမယ့်, အဲဒါကိုအတိအကျမယ့်အတန်းအတွက်တူညီတဲ့နှစ်ကြိမ်ဘယ်တော့မှရဲ့အဓိပ်ပာယျ, အဲဒါကိုအားလုံးအင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်ကျော်ထွက်ပျံ့နှံ့ရဲ့အမြဲစစ်မှန်တဲ့င်. ဒါဟာအမှန်တကယ်ပရီးမီးယားလိဂ်တိုင်းပြည်စူးစမ်းလေ့လာချင်ပေလိမ့်မည်သူကိုဒီသဘာဝကခရီးစဉ်တစ်ဦးစီကို. ဒါဟာအထင်ရှားဆုံးမြို့ကြီးများကပါဝင်ပတ်သက်, ၏အများဆုံးအသည်းအသန်ပြသမှုအချို့ ဒေသဆိုင်ရာ ယဉျကြေးမှု, နှင့်အချို့သောအမှန်တကယ် မယုံနိုင်စရာအားကစားကွင်း. Plus အား, လာမယ့်တမြို့ကနေစီးသင်ကျော်ကြားသောဗြိတိန်ကျေးလက်၏တော်တော်လေးဖျတ်ကနဲမြင်ရနိုင်ပါတယ်!
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ခရီးစဉ်ဒီလိုမျိုးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်, ပရီးမီးယားလိဂ်ပါဝင်ပါသည်ကြောင်းပေးထား 20 ရာသီနှုန်းအဖွဲ့များ. ဤသည်မှာသော်လည်းနမူနာ၏အရာတစ်ခုခုသည်, သငျသညျ ယူ. နိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများ မြို့ကြီးများ, အားကစားကွင်း, သငျတို့သတွေ့မြင်နိုင်သည်အဖွဲ့များ.
အကြောင်းရင်းနှစ်ခုလန်ဒန်ခရီးစဉ်၏ဤမျိုးကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးဒါဟာင်. ပဌမ, သငျသညျဆုံးဖွယ်ရှိနေဘယ်အရပ်ကဖွင့် ယင်ကောင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သို့. နှင့်ဒုတိယ, ဒါကြောင့်အများအပြားပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်များမှအိမ်ပြန်မယ့်, ကစတငျဖို့ကောင်းတဲ့နေရာအရပ်ရဲ့အဓိပ်ပာယျနဲ့အဆုံး သင့်ရဲ့ခရီး ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းanice ကွင်းဆက်များအတွက်. သငျသညျအများအပြားကလပ်နှင့်အတူစတင်နိုင်မည်, ငါမူကား Stamford Bridge ကိုမှာချယ်လ်ဆီးကိုမြင်လျှင်အကြံပြုချင်ပါတယ်. အဆိုပါနေရာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, ပရီးမီးယားလိဂ်အားကစားကွင်း၏တဦးတည်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ ကိုးကား 140 သမိုင်းနှင့်အကျင့်စရိုက်၏အနှစ် အကောင်းဆုံးကိုအကြားကစောင့်ရှောက်သောဒြပ်စင်အဖြစ်. ထိုအခါအဖွဲ့သည်နီးပါးအမြဲယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ပါတယ် (နှင့်ဖြစ်သင့် 2018 အဖြစ်ကောင်းစွာ).
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေ, အတူစတင်ရန်တဦးတည်းယုတ္တိလမ်းကြောင်း Brighton ဆီသို့တောင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ Brighton အတွက်အင်္ဂလန်ရဲ့အကောင်းဆုံးကမ်းခြေမြို့များတဦးမှာအဆုံးသတ်တစ်ခုအလွန်လျင်မြန်စွာစီးင်. ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ဗစ်တိုးရီးယားဘူတာ, လန်ဒန်တံတားဘူတာ, နဲ့လန်ဒန်စိန့်. Pancras ဘူတာရုံအားလုံးအကြမ်းဖျင်းတစ်နာရီယူကြောင်းတိုက်ရိုက်စီးပြီ.
ပြီးတာနဲ့ Brighton အတွက်, သငျသညျအခြို့သောကယ့်ကိုအထူးဒေသများတဝိုက်လမ်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ခြေထောက်ဆန့်နိုင်ပါတယ်. မြို့တော်ရဲ့ဆိပ်ခံတံတားကျော်ကြား (ယင်း၏တရားမျှတတဲ့ကဲ့သို့လေထုရန်နှင့်မြင့်မားဖျော်ဖြေမှုကျေးဇူးတင်စကား), အနည်းငယ်အဟောင်းစျေးဆိုင်များနှင့်စူးစမ်းလေ့လာရကျိုးနပ်စားသောက်ဆိုင်ခရိုင်ရှိပါတယ်. ဘောလုံးပညာ, သငျသညျ Falmer အားကစားကွင်းမှခေါင်းနှစ်လုံးပါလိမ့်မယ်, ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်အသစ်များမြား၏တဦးတည်းအရာဖြစ်ပါသည်. Brighton & Hove Albion အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကရဲ့ထိပ်ပြေးတစ်ဦးအင်အားကြီးမဟုတ်ပါဘူး, သို့သော်၎င်း၏ပရိသတ်များအသည်းအသန်ဖြစ်နိုင်ပြီးတစ်ဦးပွဲစဉ်တစ်နွေးအတွက်နေ့လည်ခင်းသို့မဟုတ်ညဦးယံအချိန်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ကမ်းခြေ ဆောင်းဦးအတွက်မြို့.
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Lille
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Rotterdam
လန်ဒန် Eurostar ရထားမှ Antwerp
Brighton ပြီးနောက်, သငျသညျအနောက်ဘက်ဆီသို့တက်ကိုဝိုငျးစတင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ထိုဧရိယာအနည်းငယ် options များ. သင့်အနေဖြင့်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Bournemouth သို့မဟုတ်ဆောက်သမ်တန်မှခရီးတတျနိုငျသ, ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးများပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းများရှိသည်အဖြစ်. သို့သော်ဘောလုံးမြောက်ဘက်ကိုတက် သာ. ကောင်း၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ဒါမြို့များဖြစ်ကြသည်, ပွဲတစ်ပွဲ), အဖြစ်ကောင်းစွာမြောက်ဘက်ရွေ့လျားစတင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးကန့်. ဒါနဲ့ကာဒစ်ဖ်မှဦးတည်အကြံပြုချင်ပါတယ်, ဝေလနယ်. Brighton ဘူတာမှကာဒစ်ဖ်ဗဟိုမှရထားနှင့် ပတ်သက်. လေးမှ run နိုင်ပါတယ် လေး-and တစ်နှစ်ခွဲ နာရီ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအနေဖြင့်တဦးတည်းမှသုံးအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ. အဆိုပါရထား ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိုပြီးပြေးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်အားလုံးနေ့၌.
ကာဒစ်ဖ်အတွက်, သငျသညျကာဒစ်ဖ်စီးတီးအားကစားကွင်းမှာကာဒစ်ဖ်စီးတီးကိုမြင်လျှင်ပါလိမ့်မယ်, ဒီအဆင့်များအတွက်မျှမျှတတရင်းနှီးသောနေရာဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်. တဖန်သင်တို့ဆွမ်ဆီးစီးတီးဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပွဲစဉ်ကြည့်ရှုရန်သင့်ခရီးစဉ်အချိန်ဖြစ်ပျက်လျှင်, သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အားရစရာဘို့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်. ဤသည်နောက်ဆုံးတွင်ဝေးတဲ့မြောက်ဘက်ပိုကြီးဘောလုံးမြို့များမှသို့သော်လမ်းကြောင်း en တစ်ဦးမျှမျှတတအမြန်ရပ်တန့်ဖြစ်သင့်. အဆိုပါသုံး- ကာဒစ်ဖ်ဗဟိုကနေလေးနာရီရထားမှလီဗာပူးလ် Lime Street, ငါ့ထောက်ခံချက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမျှတစွာပုံမှန်နှင့်ရိုးင် ခရီးစဉ်, ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ, နှင့်ညာဘက်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံး၏စိတ်နှလုံးထဲသို့သင်ကြာ. မဖော်ပြရထားညာ Cotswolds တလျှောက်တွင်သင်သည်ကြာ, တစ်ဦးရဲ့တစ်ဦးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝကဧရိယာ ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်မှု နှင့်အလိုလို.
လီဗာပူးလ်အတွက်, သငျသညျကိုစူးစမ်းဖို့အခြို့သောအချိန်ဘေးဖယ်ထားဖို့လိုလိမ့်မည်, တကယ့်တစ်ဦးစစ်မှန်ခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်မြို့ရဲ့အဖြစ်. သို့သော်ဘောလုံးဆဲအဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. Anfield, ဘယ်မှာလီဗာပူးလ်ပြဇာတ်, အကောင်းဆုံးကိုပရီးမီးယားလိဂ်အားကစားကွင်းတို့တွင်အဖြစ်မှလူသိများသည်, အများအပြားယုံကြည် ဒီတစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဖွဲ့များအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘုန်းအသရေပြန်လည်နှင့်ချန်ပီယံဖမ်းဆီးဖို့. အဲဒီအားကစားကွင်းကြောင်းပြောရုံင်, ပြီးသားက၎င်း၏စွမ်းအင်လူသိများ, နောက်နှစ်သို့မဟုတ်ဒါများအတွက် buzzing ရပါမည်, ကောင်းစွာဗြိတိန်၏အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးအတွေ့အကြုံအတွက်လုပ်ပေးနိုင်.
ဒီကနေ အမှတ်, အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. သင်၏အချိန်ကန့်သတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ပြန်လန်ဒန်တည်မတိုင်မီမန်ချက်စတာဖို့အလွန်တိုတောင်းသောခရီးကိုယူဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်. အချိန်ရှိမယ့်နေလျှင်, သို့သော်, ငါမန်ချက်စတာအတိတ်နှင့်မြောက်ဘက်သွားအကြံပြုချင်ပါတယ်, နယူးကာဆယ်မှလီဗာပူးလ် Lime လမ်းကနေအကြမ်းဖျင်းသုံးနာရီစီးဖြစ်သင့်သောအရာပေါ်. သင်တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ရနိုင် စီးနင်း, နှင့်ဤမြေပုံပေါ်မှာဤမြေတပြင်လုံးအောကျ၏အရှည်ဆုံးလမ်းပိုင်းတူနေချိန်တွင်, တကယ့်တစ်မကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်မဟုတ်ဘူး.
စိန့်. နယူးကာဆယ်လ်အတွက်ဂျိမ်း '' Park ကပရီးမီးယားလိဂ်အတွက် nicest အားကစားကွင်းဖြစ်နိုင်သည်, ဒါဟာအတော်လေးပုကိုက်ညီမနိုင်လျှင်ပင် သမိုင်း Anfield ကဲ့သို့သောအရပျ. ဒါဟာအဆင်းလှရဲ့, တစ်ခုတည်းလာ၏, နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၏အတော်လေးနည်းနည်းရှိစေနိုင်သည်တဦးတည်းဘယ်မှာ. တကယ်ပါပဲ, မကြာသေးခင်ကလိဂ်ဖောက်တံ၏ရှေ့ဆက်, ကနယူးကာဆယ်လ်တင်ဟမ်ဟော့စပါးကိုကမောက်ကမနိုင်အကြံပြုခဲ့သည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tyneside အပေါ်သစ်ကို-ရာသီ buzz ၏ ဒီလူအစုအဝေးထဲကနေလာနိုငျကွောငျးနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ယုံကြည်ချက်. အဲဒီစိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါမလာဘဲ, ဒါပေမဲ့ဒီနေဆဲကိုးကားတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်အားကစားစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးဖှယျရာအရပျဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ထိုက်တန်လမ်းလွှဲစေသည်.
နယူးကာဆယ်လ်အတွက်အမြန်ပွဲစဉ်ပြီးနောက်, သငျသညျကျောမန်ချက်စတာမှရထားအမီလိုက်နိုင်ပါတယ်, ဖြစ်နိုင်အောင် အပေါ် အချိန်ဇယားထွက်အလုပ်လုပ်တယ်လျှင်အလွန်ထိုနေ့. နယူးကာဆယ်လ် ဗဟိုစခန်း မန်ချက်စတာဗစ်တိုးရီးယားတစ်ဦးဖြစ်သင့် Two-and-a-ထက်ဝက် တစ်ဦးထက်ပိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနာရီခရီးစဉ်.
မန်ချက်စတာမှာမျိုးစုံရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်, ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးအဖွဲ့များနှစ်ခုအဖြစ် – မန်ချက်စတာစီးတီးနှင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် – တမြို့လုံးအိမ်မှာမခေါ်. သငျသညျအထူးသဖြင့်ဘောလုံးသို့ရောက်နေနှင့်သင်ကောင်းတစ်ဦးခရီးစဉ်တစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်သုံးမနေခဲ့လျှင်, သင်တဦးတည်းသွားလာရင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအသင်းများကိုဖမ်းရန်ကြိုးစားသင့်, အချိန်ဇယားခွင့်ပြုပါလျှင်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့အကြွေစေ့လှန်စေခြင်းငှါ. မန်ယူ။ ရဲ့မန်ယူအသင်းဖြစ်ပါသည် သမိုင်းဝင် အားကစားကွင်းနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပရိသတ်များနှင့်အတူတဦးတည်း; က Man City, ရဲ့ Etihad ကွင်းပိုပြီး State-Of-The-Art ဖြစ်ပါသည်, နှင့် City နှောင်းပိုင်းတွင်များ၏ပိုကောင်းအဖွဲ့ခဲ့.
သငျသညျမန်ချက်စတာ၌ပြစ်မှားမိနေပြီးတာနဲ့ကချောမွေ့င်, Two-and-a-ထက်ဝက် နောက်ကျောမှသို့မဟုတ်သုံးနာရီကြာရထားစီး လန်ဒန် မန်ချက်စတာဗစ်တိုးရီးယားသို့မဟုတ်မန်ချက်စတာ Piccadilly ထံမှ. ထိုအခြိနျတှငျ, ခရီးစဉ်တစ်ဦးထုပ်ပိုးပြီးဖြစ်ပါသည်! သင်ခရီးရဲ့အစမှာမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးအဆိုပါကလပ်၏တဦးတည်းကြည့်ဖို့လန်ဒန်၌သင်တို့၏ကျန်ရှိနေသောအချိန်အသုံးပြုချင်သော်လည်း. ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အတော်ကြာကောင်းသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်.
သငျသညျရထားခရီးသွားစူးစမ်းနှင့်အချို့သောဘောလုံးခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? အကောင်းဆုံးကိုက်ဘ်ဆိုက်မှ အမိန့်လက်မှတ်များလေ့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဖြစ်ပါသည်
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ဘောလုံး #ဘောလုံးကစား ရထားခရီးသွား traveltips
ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်, ဘောလုံးနှင့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်, ကူညီခြင်းအခြားသူတွေကဒီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစေ. ငါအားလပ်ချိန်မှာအချိန်ရှိသည်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုလည်းငါ၏အကြံအစည်များနှင့်ပုံပြင်များကိုရေးသားမျှဝေဖို့ကိုချစ်. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ